किन बन्द भयो गुगल प्लस?
काठमाडौ - सन् २०११ मा, सञ्चालन भएको गुगल प्लस मंगलबार बिहानबाट बन्द भएको छ। गुगल प्लस, फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल गुगलले बनाएको सञ्जाल हो।
संचालन भएको वर्ष, सन् २०११ को अन्त्य तिर नै विशेषज्ञहरूले यसको अन्त्य हुने बताएका थिए। तर, गुगलले भने सन् २०१८ मा, ‘डाटा ब्रिच’ अर्थात प्रयोगकर्ता तथा गुगल प्लसकै जानकारीहरू अनाधिकृत व्यक्तिहरूबाट चोरी हुने, हराउने जस्ता सुरक्षाको समस्याका कारण देखाउँदै, बन्द गर्ने जानकारी दिएको थियो।
के हो त गुगल प्लस?
गुगल प्लस फेसबुक, ट्विटर जस्तै सामाजिक सञ्जाल हो, जसमा फोटो, स्टेटसहरू पोष्ट गर्न मिल्छ। सुरु भएको एक हप्तामै लाखाैं प्रयोगकर्ताले साइन इन गरेको गुगलको दाबी थियो। तर, यसलाई निरन्तर रूपमा चलाउने ‘लग इन’ गर्ने भने एकदमै थोरै थिए।
के गल्ती भयो ?
सोसल मिडिया कन्सल्टेन्ट नाभारराको अनुसार, गुगल प्लस संचालन भएको दिन देखि नै असफल भएको थियो। प्रयोगकर्ता मैत्री नहुँदा र नरूचाएको कारण पनि गुगल प्लस बन्द हुने स्थितिमा पुगेको हो।
फेसबुक, ट्विटरमा क्रमश ‘लाइक’ र ‘फेभरेट्स’ रहँदा गुगलमा भने ‘प्लस वान’ बटन हुन्थ्याे। त्यस्तै, फोटो र भिडियोको लागि ‘ह्याङ्ग आउट’ फिचर थियो।
तर, सन् २०१४ मा, जब गुगुल प्लसका संस्थापक भिक गनडोट्राले गुगुल प्लस छाडे तब यसमा अझ समस्या देखा पर्ने थालेको थियो। सन् २०१५ मा, सफल र प्रभावकारी मानिएका ‘ह्याङ्ग आउट’ र ‘फोटो’ जस्ता फिचर पनि गुगल प्लसबाट छुटिएर स्वतन्त्र एपको रूपमा चल्न थालेपछि गुगल प्लस अझ धारासायी बन्यो।
गुगल प्लसले ‘युट्युब’ र ‘कम्युनिटि’ जस्ता ‘फिचर’ थप्यो तर, ती ‘फिचर’ले पनि प्रयोगकर्तालाई तान्न सकेन। सन् २०१८ मा गुगल प्लसको सुरक्षामा समस्या देखा पर्ने थाल्यो। गुगल प्लस स्वयंमले नै सफ्टवेयरमा समस्या आएको मानेको थियो। करिब ५२ लाख प्रयोगकर्ताहरूकाे जानकारी ‘थर्ड पार्टी’ को सहज पहुँचमा पुगेको पत्ता लागे पछि बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो।
नेमइम नुरले बनाएको यो साइटको मुख्य उद्देश्य साथीहरू बनाउन तथा नयाँ विचारलाई स्थान दिनु थियो।